MAQAL:Ajakis & Marshaale maxay Puntland ku arkeen ?(WAREYSI XIISO LEH) – SBC
MAQAL:Ajakis & Marshaale maxay Puntland ku arkeen ?(WAREYSI XIISO LEH)
Jilayaasha caanka ah ee Soomaaliyeed Cabdi Muriidi (Ajakis) & Cabdi Jaylaani Malaaq (Marshaale) ayaa dhawaan soo gaarey deegaanada Puntland iyadoo ujeedada socdaalkoodu yahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen bandhig faneed ku aadan Isdhexgalka Bulshada oo ay wado wasaarada warfaafinta Puntland.
Ajakis & Marshaale oo wareysi xiiso leh siiyey SBC ayaa waxay sheegeen inay tahay markii ugu horeysay ee ay yimaadaan deegaanada Puntland, waxaana ay tibaaxeen in ay ku faraxsan yihiin sida diiran ee loogu soo dhaweeyey magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo deegaano kale oo ay safar dhanka dhulka ah ku soo mareen.
Wareysiyadan xiisaha leh ee ay bixiyeen Marshaale & Ajakis waxay ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin amaanka iyo soo dhaweynta Puntland ka jirta iyagoo ku kaftamay in cagoohada dhulka loo diiday taasi oo ay ula jeedaan sida balaaran ee loo soo dhaweeyey.
Ajakis oo ka hadlayey wixii ugu yaabka badnaa ee uu kala kulmo socdaalkiisa Puntland ayuu yiri “Cimrigaaga oo raaga geel dhalaaya aas ku tusaa aan dhahnaa unuka hada hee aboow waxay joogtaa cimrigaaga oo raaga Garoowe aa ku tusaa”, waxaa iigu yaab badneyd anigoo arkay geel geel nuugaya…..aboow unuka xitaa eriga in uu na soo dhaweeyo aa hada dhiman wax kale oo inoo dhiman ma jirto”.
Marshaale wareysiga lala yeeshay wuxuu isaguna yiri “Garoowe aniga waxaan u heystey meel oo la tagi karin, laakiin markii imid wax ka duwan wixii aan filaayey aan arkay, hee lama kun qof aa na soo dhaweysay maxaan kaaga sheegaa hee……”.
Link-ga hoose ka dhageyso wareysiyada xiisaha leh ee Ajakis & Marshaale.DHAGEYSO WAREYSIGA AJAKIS
DHAGEYSO WAREYSIGA MARSHAALE
Welcome to the Somali state of Punland brothers.
geel geel nugaya walaahi waan qoslay sxb wlc to puntland ajakis and marshaale waan soo dhoweynaynaa faninta somaliyeed
Kusoo dhawaada deegaanada dawladda puntland ee Sommaliyeed. shacab iyo dawlada ba way ina soo dhawanaysaa
Marshaale iyo ajakis puntland waa laidhnka sugaayey soo dhawada saaxibyaal welcome wadankini waaye hilib iyo caano geel qac kasiiya
Waa yaabe maxa puntland soo galay oo marshale iyo ajakisna no kenay nomay iman jirine ma alshabaab ayaya ka soo bursatay
waxay taas cadaynaysaa in puntland tahay meel nabadda ah oo somali ladadaneeyo caalamkunba ku xiranyahay waxaa na gaarsiiyay maamulka
sir mxmud says:
kkkkkkkk woow waan soo dhawaaynayna jilaasha caanka ah boosaaso markay imaadeen lo’da ayaa soo dhowaaynysa
kkkkk walaah wax lagu qoslo weytehey ajakis hadalkiisa waxaan lenahey ku so dhawaada puntland
im proud to be muslim im proud to be puntlander im proud to be puntlander im proud to be somali